Breaking...अचानक ! शान्ता चौधरीको स्वास्थ्यमा ग'म्भीर स'मस्या आईसीयुमा भर्ना - Prateek Nepal
Breaking…अचानक ! शान्ता चौधरीको स्वास्थ्यमा ग’म्भीर स’मस्या आईसीयुमा भर्ना
October 10, 2020 October 10, 2020 Ramash kunwar
२४ असोज, काठमाडौं । को’रोना भा’इरसबाट सं’क्रमित नेकपा संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीलाई आईसीयुमा सारिएको छ । चौथो दिनमा पनि केही सुधार नआएपछि चौधरीलाई गएरातिदेखि आइसीयूमा सिफ्ट गरिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । चौधरीको उपचार बीर अस्पतालमा हुँदै आएको छ । उनले यसअघि आफूलाई श्वास फेर्न गाह्रो भएकाले फोन नगरिदिन सामाजिक सन्जालमार्फत् आग्रह गरेकी थिइन् ।
चौधरीमा यही असोज १९ गते को’रोना सं’क्रमण पुष्टि भएको थियो । उनमा को’रोनाको लक्षण देखिएको थियो ।
शान्ता चौधरी स्तन क्या’न्सर’बाट समेत पी’डित भएकी थिइन् । उनले क्यान्सरको उपचार भारतको नयाँदिल्लीमा गराएकी थिइन् । क्या’न्सर रो’गको उपचारका लागि सरकारले दिएको पाँच लाख रकम बचेपछि उनले सरकारलाई नै फिर्ता गरेकी थिइन् । onlinekhabar.comबाट
त्यस्तै,नेपालमा को’रोना स’क्रमितको संख्या १ लाख नाघेको छ । पछिल्ला केहि दिनयता संघीय राजधानी काठमाडौँ सहित देशैभर को’रोना सं’क्रमितको संख्या ह्वा’त्तै बढेको छ । दिनप्रतिदिन को’रोना स’क्रमितको संख्या बढीरहँदा यता सरकारले भने अर्को क’डा चे’तावनी दिएको छ ।